Golaha deegaanka Gaalkacyo oo lasoo doortay, dumarka oo helay lix xubnood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGolaha deegaanka Gaalkacyo oo lasoo doortay, dumarka oo helay lix xubnood
March 24, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa lasoo doortay maanta oo Axad ah.
Xubnaha golaha cusub ee Gaalkacyo ayaa ka kooban 31, kuwaasoo kasoo jeeda qabiilooyinka degan magaalada.
Xubnaha cusub ayaa la dhaarshay isla maanta kadib markii la sii daayay liiska magacyadooda.
Maalmaha soo socda ayaa golaha deegaanka Gaalkacyo dooran doonaan duqa cusub ee magaalada.
Nabadoon Yaasiin Cabdisamad ayaa ahaa duqa kumeelgaarka ee Gaalkacyo tan iyo bartamihii bishii November ee 2018 kadib markii madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali uu kala diray golihii xilligaas.
Dumarka ayaa lix xubnood ka helay golaha deegaanka ee magaalada Gaalkacyo, sida ka muuqata liiska.
Waxaa moodaa in tirada hadda ay dumarku heleen ay siyaaday marka loo barbardhigo golayaashii hore ee degmada.
Inta badan dumarka ayaan xubno tiro fiican ka helin golayaasha dowladda Puntland, taasoo ay sababtay nidaamka awood-qeybsiga qabiilka ku saleysan oo aan door fiican siin haweenka.
Saahid Maxamuud Cali oo loo doortay duqa cusub ee Gaalkacyo
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka aheyn dagaalka Tukaraq. Bayaan kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri: “dowladda Puntland waxay cadeynaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka ahayn [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ee PSF ayaa burburiyay saldhig talis iyo saad oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen Buuraha Galgala, sida PSF ay ku sheegeen boggooda facebook. Ciidamada PSF ayaa 18 xagjiriin Al-Shabaab katirsan ku [...]